‘मिस वर्ल्ड २०१८’को फाइनल प्रतिस्पर्धा आज, श्रृंखलाको सम्भावना कस्तो ? |
‘मिस वर्ल्ड २०१८’को फाइनल प्रतिस्पर्धा आज, श्रृंखलाको सम्भावना कस्तो ?
कर्पोरेट नेपाल २२ मंसिर २०७५, शनिबार मनोरञ्जन
काठमाडौं । चीनको सान्या शहरमा जारी ‘मिस वर्ल्ड २०१८’को अन्तिम प्रतियोगिता (फाइनल) शनिबार बेलुकी हुँदै छ । यस प्रतियोगितामा ३० जना प्रतिस्पर्धिहरु मध्येबाट १२ प्रतियोगी अर्को चरणमा जनन्छन् । लगत्तै भइहाल्ने दोस्रो प्रतिस्पर्धाबाट अघि छानिएका १२ जना मध्येबाट पाँच जना उत्कृष्ट प्रतियोगी छनोट हुन्छन् ।
यिनै पाँचजना मध्येबाट एक जना प्रतियोगी मिस वर्ल्ड २०१८ बन्ने छिन् ।
चीनको सान्यामा भइरहेको मिस वल्ड प्रतियोगितामा श्रृंखला खतिवडाले दुई विधागत अवार्ड जितेकी छिन् । सोमबार साँझ भएको घोषणामा श्रृंखलाले ‘मल्टिमिडिया’ अवार्ड र ‘व्युटी विद पर्पज’ जितेकी हुन् ।
मिस वर्ल्डको टप ३० मा पर्नका लागि महत्वपूर्ण मानिने फस्टट्रयाक इभेन्टअन्तर्गत उनले सात मध्ये दुई अवार्ड जितेकी हुन् । यसअघि आइतबार भएको हेड टू हेड प्रतिस्पर्धामा भने सिंगापूरे सुन्दरी विरुद्धको प्रतिस्पर्धामा पराजित भएकी थिइन् ।
मिस वर्ल्डमा धेरै नै महत्वका साथ हेरिने ब्युटी विद पर्पजमा शृंखलाले बनाएको भिडियो २५ प्रतिस्पर्धीलाई उछिन्दै पहिलो भएको हो । विश्वभरका १ सय १८ देशका सुन्दरीले मिस वर्ल्डमा भिडियो लिएर गएका थिए । आयोजकले १ सय १८ मध्येबाट २५ भिडियो सर्टलिस्ट गरेका थिए । यसरी छानिएका २५ मध्ये शृंखलाले बनाएको भिडियो उत्कृष्ट भएको हो ।
शृंखलाले मकवानपुरको चेपाङ बस्तीमा स्वास्थ्य चौकीको आवश्यकता र स्वास्थ्य चौकीले त्यो समुदायमा आएको परिवर्तनलाई भिडियोमा कैद गरेकी थिइन् । सिसन बानियाँले शृंखलालाई भिडियो निर्माणमा सघाएका थिए ।
सोमबार साँझ नै मल्टिमिडिया अवार्डको पनि घोषणा भएको थियो । नेपालकी शृंखलालाई यो विधामा भने सुरुदेखि नै दाबेदार मानिँदै आएको थियो । सामाजिक सञ्जालमा उपस्थिति, फलोअरको इंगजमेन्ट, क्रिएटिभ कन्टेन्ट र प्रभाव आदिलाई ध्यानमा राखी दिइने अवार्डमा शृंखलाले बाँकी प्रतिस्पर्धीलाई निकै पछाडि छाडेकी थिइन् ।
शृंखलाले फेसबुक, इन्स्टाग्राम, मोबस्टार, ट्वीटर, मोडल पावरलाइभ आदि सबै माध्यममा दमदार उपस्थिति जनाएकी थिइन् ।
सामाजिक सञ्जालबाहेक प्रतियोगीले मिस वर्ल्डको आफ्नो यात्रालाई प्रस्तुत गर्ने शैली पनि निर्णयको आधारको रूपमा अगाडि सारिएको थियो । योसँगै सान्याका मनोरम दृश्यको प्रचारप्रसार र ब्युटी विद पर्पजको प्रचार पनि मल्टिमिडिया अवार्डको मूल्यांकनका आधार थिए ।
शृंखला सबै मापदण्डमा उत्कृष्ट अंक ल्याउँदै मल्टिमिडिया अवार्डको हकदार बनेकी थिइन् । यसै गरी सान्याको पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि बनाउनुपर्ने भिडियोमा शृंखलाले तेस्रो स्थान हासिल गरेकी थिइन् । यो विधामा पहिलो स्थान केन्या र दोस्रो स्थान चीनले पाएको थियो ।
प्युरिटो रिको र इंग्ल्यान्ड क्रमशः चौथो र पाँचौं भएका थिए । शृंखला विजेता बनेको मल्टिमिडिया अवार्डमा भने दोस्रो स्थान मेक्सिकोले कब्जा गरेको थियो भने तेस्रो स्थान केन्याले जितेको थियो । दुई विधाका अवार्ड जितेसँगै शृंखला मिस वल्र्डको फाइनलमा प्रवेश गरेकी थिइन् ।
मिस वर्ल्डमा भोट गर्ने आज अन्तिम दिन, श्रृंखलाको दरिलो अग्रता कायमै
‘हेड टू हेड’ को दोस्रो चरणमा पराजीत भइन् श्रृंखला, टप ३० को सम्भावना कायमै
मिस वल्र्डमा दावेदारी बनाउँदै नेपाली चेली श्रृंखला, भोटिङमा सबैभन्दा अगाडि